Paulo Dybala oo shaaca ka qaaday inuusan marnaba doonaynin inuu u dhaqaaqo Kooxda Manchester United – Gool FM
(Manchester) 09 Okt 2019. Weeraryahanka Kooxda kubadda cagta Juventus ee Paulo Dybala ayaa meesha ka saaray wararka soo jeedinaya inuu u furanaa inuu u dhaqaaqo Premier League intii lagu guda jiray suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.
Iyadoo la sheegay inay ka dhacday xaaladdiisu meel aan wanaagsanayn kaddib imaanshiyaha macallinka cusub ee Maurizio Sarri, Dybala waxaa si aad ah loola xiriirinayay mid kasta oo ka mid ah Kooxaha Manchester United iyo Tottenham Hotspur, laakiin ugu dambeyntii wuxuu sii joogayaa Turin.
Sikastaba ha noqotee, inkastoo wararkaas xanta ah la isla dhexmarayo, haddana xiddiga reer Argentina ayaa sheegay inuu mar waliba doonayay inuu u dagaallamo booskiisa kooxda haysata horyaalka Serie A.
25-sano jirkaan ayaana u sheegay Corriere della Sera: “Ma ahayn xagaaga fudud, maqalka magacaaga wuxuu xiriir la leeyahay koox kasta iyo meel kasta, meesha aadan dooneynin inaad aaddo, ma’ahan wax fiican, laakiin tani waa kubadda cagta, xitaa inta uusan furmin suuqa kala iibsiga waxaan iri: “Waxaan doonayaa inaan halkaan joogo.”
“Waxaan u maleynayaa inay muhiimad wayn lahayd in garoonka lagu sii daayo hadalkan, xitaa haddii ilaa maalinta ugu dambaysa uusan qofna ogayn waxa dhici doona, waxaan doonayay inaan joogo, waxaan doonayay inaan halkaan ka ciyaaro oo mustaqbalkeyga ciyaareed ku sii wato Juve.”
“Waxaan u maleynayaa inaan wali wax badan bixin karo, waxaana tusay taas kulankii Inter.”
Dybala ayaa dhaliyey hal gool waxaana uu caawiyey labo gool oo kale todobo kulan oo uu ciyaaray tartammada oo dhan illaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.